Unokwenza njani- / i-Simplr Camera Straps
Ukuba ufunda oku, unethuba elihle kakhulu lokuthenga enye yekhamera zethu zekhamera ... kwaye ngoko sithetha enkosi.
Nazi ezinye iindinyana eziwusizo zokufunda ngaphambi kokufaka iqela lakho elitsha lekhamera.
M1 Uthotho indlela-ukuya kuyo
Ukuba unemibuzo nayiphi na into, Qhagamshelana nathi. Sithanda ukuva kubaxhasi bethu kwaye sihlala sinovuyo ukunceda.
ezaposwa ngomhla Matshi 29, 2020 Matshi 30, 2020 by Simplr
Guqula iF1 yakho ibe liLaphu leWrist
Ukutshintsha ngokukhawuleza ikhamera yakho ye-F1 yekhamera ukusuka kumtya omde wesitayile, ukuya kwisikeji-ubude entanyeni akufuneki kuchazwe. Ukuyiguqula ibe ngumtya wentambo kungabonakali ngokucacileyo - ude ubone ukuba kulula kangakanani!
Musa khathaza ukubamba ipopcorn, kuba le yeyona vidiyo imfutshane kwimbali yoluntu.
ezaposwa ngomhla Septemba 19, 2018 Matshi 26, 2020 by Simplr
Ukufaka i-Simplr Split Rings, okanye iLug F1
* Ukuba usanda kufaka iInclr Split Rings, kungekhona i-F1 yekhamera yekhamera, unganqumla ngqo kwi-1: 07 kule vidiyo.
Ukuphakanyiswa kwekhamera yeekhamera kunye namakhonkco ahlukeneyo kufana nokubeka isitshixo kwi-keychain-kodwa endaweni yesitshixo, ikhamera.
Hlanganisa i-F1 yakho ukuze ulungiso lwethebhu lungene phambili yomzimba wakho xa ikhamera yekhamera isongezwa ngokugcwele, kwaye ikhamera ifake isitayela sokuguba. Abanye abantu bathanda ukugqoka ikhamera ngakwesobunxele babo, abanye baye ngasekunene. Yenza nantoni na eyona nto ikhululekile nina.
Khangela ngokukhawuleza ukuqhelaniswa kwendlela yokuqhelanisa ukuze uqiniseke ukuba awuyikuyibuyisela emuva okanye ngaphakathi.
Pry isikhala esincinane kwindandatho yokwahlula, ngokubanzi ngokwaneleyo ukunyusa ukuphela kwecingo ngecimbi kwikhamera yakho. Akunakwenzeka ukuba uzakufuna naziphi na izixhobo zalo; isithonjana sakho kufuneka sanele.
Phenduka indandatho yohlulo kuze kube yilapho intambo yonke idlulile kwidolo kwaye iphinda ibuye kunye (njengokhiye wesitshixo).
iindidi: Njani-ukuya, Izixhobo, Njani-, F1, Njani-ukuya, i-M1 Series
ezaposwa ngomhla Ngamana 31, 2017 Oktobha 1, 2019 by Simplr
Indlela yokufakela i-Mini QD Loops ™ kwiiKhamera ezineeSahlulo seSahlulo
Ngaphandle kokuba u-100% unokwenene ukuba ikhamera yakho inemikhono ephathekayo, kukulungele ukuba unamathele kwi-Mini QD Loops ngokusebenzisa iindandatho zokuhlukana. Ukongezelela, sikhuthaza ukuba usebenzise zethu, njengoko zenziwe ngokukodwa ukuba zisebenze kakuhle kunye neengcingo zentambo (kakhulu bhetele kunezona zintathu).
1. Xhawula intambo yentambo ngeqhekeza lokwahlukana.
2. Xoxa ngokukhawuleza kwe-mini-nqakraza nge-loop.
3. Yibani ngokukhawuleza-nqakraza ngokukhawuleza kwi-cinch loop.
Ukuba ikhamera yakho iza neengxowanxantathu zengqungquthela, sincoma kakhulu ukuba sithathe indawo yazo ngeenxa zonke.
Senza ezinye Iindandatho zengqungquthela eziphambili osebenza ngokugqibeleleyo ngee-Mini QD loops, kwaye ungafumani uphahla njengamaqhekeza ahlukeneyo.
Udidi: Njani-ukuya, i-M1 Series
tags: Strap Camera, M1a, M1ultralight, M1w, Isikhongo sesandla
ezaposwa ngomhla Ngamana 30, 2017 Oktobha 1, 2019 by Simplr
Indlela yokufakela i-Mini QD Loops ™ kwiiKhamera ngaphandle kweeNgcezu ze-Split
Ngaphambi kokufikelela kwi-Mini QD Loops ngqo kwi-strap lugs, funda lo msebenzi ubalulekileyo: Ingxowa yeengxowa zifakela: Ziziphi na kwaye kutheni ndifanele ndikhathalele?
Ngaphandle kokuba uyi-100% ngokuqinisekileyo ukuba ikhamera yakho ineentsika ezigudileyo, kungcono ukuba uqhoboshele iiLuphu zeMin QD ngemigca eyohlulahlulwe, njengoko kucacisiwe Apha.
1. Xhawula intambo yentambo nge-legp strap. Inokukunceda ukusebenzisa uluhlu lwetambo okanye inyolo yezinyosi.
ezaposwa ngomhla Ngamana 29, 2017 Disemba 19, 2019 by Simplr
Ingxowa yeengxowa zifakela: Ziziphi na kwaye kutheni ndifanele ndikhathalele?
Ukufakwa kwezigqoko zentsimbi zizinzima "zeemikhono" zentsimbi "eziphakathi kweengqayi zesikhumba. Ziye zenzelwe ukunciphisa ingubo yensimbi yensimbi ebangelwayo xa insimbi eqhekezayo idibanisa iindandatho zixubha ngokubhekisele kwiingxobo zensimbi ezingenanto. Ezinye iikhamera zinezigqoko zentambo kwaye ezinye aziyi.
Iikhamera zeFijifilm ziyaziwayo ngokuba zifakelwe iingxube zeengxowa zentambo, kunye nazo zonke iikhamera ze-Fuji eziquka i-X-Pro1 kunye ne-X-E1.
Oku kubonakala ngathi, ngaphakathi kweengxowa zesikhumba:
Kutheni Ufanele Unakekele
Ukuba ikhamera yakho ifakwe kwisigxina seengcambu (njengalezo ziboniswe ngasentla), kwaye unamathele ikhonkco yentambo yekhamera ngokukhawuleza kwikhamera (ngaphandle kwengubo edibeneyo), banokugqoka kwangaphambili intambo.
Izinketho zokufaka iiKhamera ezinezikhonkwane ze-Strap Lug
Sebenzisa amacici aqhekezayo (senza abalungileyo). Namathisela i-loops yentambo kumacangca ahlukeneyo njengawe: Indlela yokufakela i-Mini QD Loops kwiiKhamera ngeeRiphane zeSahlulo
Zama ukususa ngokukhawuleza ukufakwa njengoko kuthethwa apha: Ukususa i-Strap Lug Inserts evela kwezinye iiKhamera ze-Fujifilm.
thenga i-Mini QD Loops, kwaye ukhangele ukuba unxibe rhoqo.
tags: Fuji, FujiFilm, Ukufakwa kwezigxoba, X-E1 (ekupheleni), X-E2, X-E3, X-Pro1 (ekupheleni), X-Pro2, X-T1, X-T2, X100F, X100S, X100T
ezaposwa ngomhla Ngamana 28, 2017 Oktobha 1, 2019 by Simplr
Ukususa i-Strap Lug Ukufaka kwiiKhamera ze-Fujifilm (ngokuzikhethela)
Ukuba unekhamera yeFijifilm, kwaye ungathanda ukufakela i-Mini QD Loops ™ ngqo kwikhamera yakho, inamandla * unokukwazi ukususa iifolo zakho zokufakwa kweengcambu ukuze ubonise iphuzu elincinci lokunamathisela. Nceda uqaphele ukuba xa ukhangela ingxowa yesikhonkco ngexesha le nkqubo, unokuyenza ibe lula ngakumbi kunokuba ingxowa yesikhonkwane ifakwe!
Umhla wokuvelisa, ukusingqongileyo kunye nezinye izinto zidlala indima. Iikhamera ezibonakaliswe kwizinto zithinteka kakhulu kwi-galvanic corrosion ekwazi "ukubuthela" iinsimbi zensimbi ndawonye. Sebenzisa umgwebo wakho obalaseleyo, kwaye uyazi ukuba asikho uxanduva xa ukonakalisa nantoni na.
Nangona sisebenzisa Optech USA Mini QD Loops, le nqubo iyasebenza kwezinye izixhumo ze-loop, njengathi Uyilo loPhulo.
Yintoni oya kuyidinga
ikhamera yomzimba yekhamera
I-2.5mm iqhosha le-hex
1. Susa iilensi kwikhamera yakho.
2. Beka isiciko somzimba.
3. Beka ubuso bekhamera phantsi kwisitawuli sokuhlamba.
4. Sebenzisa isitshixo se-2.5mm hex ukucofa iqhina elixhapha ngaphandle, ukusuka umva uye kwifonti. Oku kunokuthatha ubungakanani obuphakathi kwamandla, kodwa akufuneki ukuba kufuneke kusetyenziswe izixhobo ezongeziweyo.
5. Phinda uqhubeke kwi-lug esecaleni. Zigcine kwindawo ekhuselekileyo, ukuze uzibeke kwakhona ukuba ziyafuneka.
6. Vavanya iileyile zokuqhawula uqiniseke ukuba awuzishiyanga nakuphi na ukukrala. Baleka isiqwenga somngxunya emngxunyeni, usitsale ngokuqinileyo kwaye usihudule ujikeleze isiqwenga esiphindaphindiweyo ukukhangela aba burri. Ukuba ungabona ngentambo, ekugqibeleni iyakubona ngokusebenzisa iintambo!
Ukuba yonke into ihlola kakuhle kwaye ilula, ungayifaka ikhonkco yakho ngqo kwikhamera yakho njengoko kuboniswe apha: Indlela yokufakela i-Mini QD Loops kumaKhamera ngaphandle kweeNgcezu zeSahlulo
tags: Fuji, FujiFilm, Ukufakwa kwezigxoba, X-E2, X-E3, X-Pro1, X-Pro2, X-T1, X-T2, X100F, X100S, X100T